SHARCIGA SHARCIYADA - Zhongshan Joineonlux Co., LTD.
Zhongshan Joineonlux Co., LTD waxaa la aasaasay 2003. Muddo 17 sano ah, Joineonlux wuxuu abuuray koritaan weyn oo ku saleysan feejignaan sare ee wax soo saarka nidaamka wax soo saarka. Joineonlux ka dib sannado badan oo dadaal iyo adkeysi aan kala go 'lahayn, ayaa loo soo saaray tayo sare oo farsamo iyo karti wax soo saar adduunka ah, Joineonlux wuxuu had iyo jeer ku dhegi karaa hal-abuurnimada sayniska iyo teknolojiyadda iyo falsafadda ganacsiga ee mas'uulka ka ah, shirkaddeennu waxay gacan ka geysaneysay yareynta kuleylka adduunka iyadoo la isku-daray tiknoolajiyada ugu dambeysa ee loo yaqaan 'LED LED' ee loo adeegsado wax soo saarka nalalka tamarta ku habboon iyo xalka, isla waqtigaas, Waxaan nahay wax soo saarka iyo iibinta sida mid ka mid ah ganacsiga heer qaran sare.
Waxay ka gudubtay CE, RoHS, TUV ... iwm iyo shahaado kale oo gudaha iyo dibeddaba ah, waxayna dhaaftay nidaamka shahaadada ISO9001, kaliya ma lahan fasal koowaad qalabaynta otomaatiga kooxda R & D, qalabka otomatiga iyo xuquuqda lahaanshaha aqooneed ee madaxa bannaan. Nalalka iftiinka iftiinka iftiinka iftiinka iftiinka iftiinka iftiinka (LED light light qulqulo), shirkadaha farsamada sare ee qaranka.
Waxaa jira shaqaale kor u dhaafaya 100, oo ay kujiraan 20 shaqaale aqoon sare leh. Waxaan diiradda saareynaa baaritaanka iyo horumarinta, iibinta. Waxaa jira 9 mashiin oo SMT ah oo horumarsan, 9 mashiinno dhejis alxan ah, 6 soo saare, 7 mashiin oo wax lagu dhejiyo. Awoodda wax soo saarku waa in ka badan 2.000,000 mitir bishii. Waxaan ku dadaalnaa sida ugu wanaagsan ee aan u hubinno qanacsanaanta macaamiisha ugu badnaan iyadoo aan soo saareyno oo aan ku bixinno alaabada ugu tayada fiican qiimaha tartanka. Kooxdayadu waxay halkan u joogaan inay u adeegaan oo ay ujeeddadeedu tahay inay kuu siiyaan adeeg adiga kuugu fiican.
Hadafkeena inaan u abuurno qiime macaamiisha, waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican ee aan ku gaari karno xaalad guul-guul ah, Haddii aad wax su'aal ah qabtid, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto, oo ah xirfadle asal ah oo hogaaminaya nalalka xargaha, in ka badan 17 sano, Joineonlux abuuray kobcitaan weyn oo ku saleysan nidaamka wax soo saarka. Iyada oo dadaal aan kala go 'lahayn, waxaan u soo saarnay galay a tayo sare leh-farsamada iyo awoodda wax soo saarka ee warshad adduunka, Waxaan soo dhawaynaynaa macaamiisha adduunka oo dhan in ay nala soo xiriiraan gorgortanka ganacsiga.